﻿ बराहक्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई जोगाउन विद्यार्थी खोज्दै पूर्वविद्यार्थीहरु
इटहरी । कोरानाको कहरमा गाउँ फर्केका युवाहरु कोहि घरै बसेर बिताइरहेका छन्, त कोहि कोरोना को त्रास कहिले अन्त्य होला र काममा फर्काैला भन्ने चिन्तामै छन् । तर, सुनसरीको बराहक्षेत्र ९ धरहराका युवाहरु भने सामाजिक दुरी कायम गर्दै फरक काममा लागीपरेका छन् ।
एक महिना देखि आफु पढेको विद्यालय ज्ञानज्योती प्रावि मर्ज हुने हल्ला सुनेपछि विद्यालय जोगाउन लागीपरेको पूर्व विद्यार्थी समूहको अध्यक्ष विस्वास वरालले बताए । बरालले भने, ‘आफू पढेको विद्यालयलाई मर्ज होइन संचालन गर्नुपर्छ भनेर गाउँका सबै यूवाहरु लागेका छौ ।’
यूवाहरुले विद्यालयलाई मर्ज नगर्न नगरपालीका र शिक्षा शाखा लाई समेत अनुरोध गरेको बरालले बताए ।
युवाहरुले विद्यालय लाई अंग्रेजी मिडियम बाट सञ्चालन गर्न गाउँ घर घुमेर सर्वेक्षण समेत गरेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई भौति सुविधादेखि शिक्षकहरुलगायत प्रविधिमैत्री बनाइरहदा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी माध्यमतिर विद्यार्थीको क्रेज बढेपछि सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजी मिडियम बाट संचालन गर्न लागीपरेको पूर्व विद्यार्थी कृष्ण प्रसाद भट्टराईले वताए ।
‘सामूदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । सबै अभिभावकहरुलाई अंग्रेजी मिडियममा पढाउन पाए सन्तानको भविष्य बन्छ भन्ने मानसिकता छ । अभिभावक हरुको सर्वेक्षण ले नी हामी लाई त्यही देखायो ।’ पुर्व विद्यार्थी समूहका कोषाध्याक्ष भिम गुरुङ्गले भने । एक सय २० जनाको सर्वेक्षण गर्दा सबै अभिभावक ले अंग्रेजी मिडियम बाट पढाई भए बच्च पढाउने बताए पछि संचालन गर्नको लागी लागीपरेको विस्वास बरालले जानकारी दिए ।
युवाहरु एक जुट भएर पहिलो चरणमा लक डाउनको विचमा पनि सामाजीक दुरी कायम गरेर विद्यालयको भवनमा रङ्ग लगाएको र अहिले पनि विद्यालयको कम्पाउण्ड क्षेत्रमा सफा गर्ने काम भएइरहेको नविन तिम्सीनाले जानकारी दिए ।
‘युवाहरुले नै रकम संकलन गरेर विद्यालयको सरसफाईको काम लाई अघि बढाएका छौ ।’ अभिभाकहरुले पनि राम्रो काम थालेको भन्दै साथ दिने बताए पछि काम गर्ने हौसला मिलेको दिनेश घिमिरेले बताए ।
पुरानो बिद्यालय व्यवस्थापन समिति सँग छलफल गरेर र अभिभाकहरुको सल्लाह सुझाब लिएरै अघि बढेको बिद्यालयका शिक्षक समेत रहेका चन्द्र प्रकाश घिमिरे ले वताए ।
ज्ञानज्योती स्कुलमै पढेका पूर्व विद्यार्थी अषोक तिम्सिनाले आफू पढेको विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै पढाई हुने भएपछि आफुले पनि छोरो त्यहीँ पढाउने बताए । उनले भने, ‘सरकारी स्कुलमै प्रकाभकारी शिक्षण हुन्छ भने किन नपढाउने ? अहिले धेरै अभिभावकहरुलाई बोर्डिङमा पढाउदा मात्रै सन्तानको भविष्य बन्छ भन्ने छ । राज्यले यतीधेरै लगानी सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गरेको छ ।’
अर्का अभिभावक राजन घिमिरेले पनि आफ्नै गाँउठाँउमा सामुदायिक विद्यालयमै प्रभावकारी रुपमा बोर्डिङ जस्तै पढाइ हुने वातावरण बन्दै गएकाले आफुले पनि नानीहरुलाई ज्ञानज्योतीमै पढाउने बताए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णराज कोइरालाले वद्यालयको दरबन्दी कटिने हल्ला आएपछि नगरप्रमुख र नगरको शिक्षाप्रमुखलाई पनि भेटेर कुरा गरेको सुनाए । कोइरालाले भने, ‘विद्यार्थी संख्या बढे त्यसको लागि व्यवस्था गर्छाै भनेपछि अहिले पूर्वविद्यार्थी भाईहरु लाग्नु भएको छ । अभिभावकहरुले पनि विद्यार्थी दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् कति सफल भइन्छ । शिक्षक आपूर्ति गर्न नगरले सहयोग ग¥यो भने अगाडि बढ्छ ।’
२०४५ सालमा स्थानीय होमनाथ घिमिरे, लिला घिमिरे र दया घिमिरेहरुले जग्गा दिएपछि स्थापना भएको विद्यालयमा अहिले ३० जना विद्यार्थी मात्रै अध्ययनरत छन् । हाल विद्यालयमा २ जना स्थायी शिक्षक, १ जना करार र १ जना राहतमा रहेको प्रधानाध्यापक कोइरालाले जानकारी दिए ।
विद्यालयमा हाल ९ कोठा रहेकोमा ३ कोठा भवन द एक्स्प्लोर नेपाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक भरतकुमार बस्नेतले सहयोग गरेका थिए भने अरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जाहिकाबाट प्राप्त भएको थियो ।
बराहक्षेत्र नगरमा कति छन् विद्यालय ?
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ११ ओटा वार्डमा ५२ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरु रहेको नगर शिक्षा शाखाका कर्मचारी राजकुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार नगरमा ३१ वटा निजी र ५ वटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् ।
गत शैक्षिक सत्रको भर्ना अनुसार धार्मिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म १४ हजार ८ सय ६ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयमा १० हजार ९ सय ५२ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखाका कर्मचारी राजकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
Afu padeko school aja yesto abastha ma gujri raheko khabar le nisabda banayo maile yo school ma 4/5 kachha padheki hu malai yo school ko dharai maya lagxa ajo yesto ramro